raha ny fanentanan’ny filoham-pirenena sy ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Raha atotaly hatramin’izao, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena avy eo amin’ny Toby Ratsimandrava, miisa 21 hatreto ny isan'ireo basy naverin'ireo dahalo avy amin'ny distrika Isandra fotsiny, ao amin’ny Faritra Matsiatra-Ambony, Fianarantsoa. Ny enina dia basy mahery vaika avokoa. Miandry ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana hatrany mikasika ny fitobaky ny fitaovam-piadiana tsy natao ho tanan’ny sivily toy izao. Ny roa dia Mas 36, ny 6 basim-borona. Nahazo vahana ihany koa ny fanefena basy vita gasy satria nahatratra fito, raha ny vaovao ofisialin’ny zandary hatrany. Maro koa ireo bala naterin’ireo jiolahy. Nahatratra 68 ny isany ka ny 65 bala ho an'ny basy mahery vaika ary 3 ho an'ny MAS 36. Ny fanentanana nataon'ny zandary avy any an-toerana sy ny miaramila avy ao amin'ny ZRPS Alpha no nahazoana izao vokatra izao.